Ukucacisa i-Oracle Dashboard - ITS Tech School
Yintoni i-Oracle Dashboard?
Yiyiphi ideshibhodi equlethe:
Iziphumo zeemviwo ezahlukeneyo
Ukufumana umxholo kwi-Oracle dashboards
Ngubani ophetheyo kunye nokutshintsha ideshibhodi?
Izinto ezingenakongezwa kwiphepha ledeshibhodi
Yintoni elawula ukujonga kwe-Oracle Dashboard?
I-oracle ideshibhodi yile ideshibhodi yezobugcisa, kunye nesishukumisela emva kwedeshibhodi yeengcaphephe zezoshishino kukubonisa umbutho Abamakishi abalulekileyo bokusebenza (KPIs) kunye nemeko yayo yangoku yemilinganiselo. Ngokuqhelekileyo, ideshibhodidi zidibanisa kwaye ziqokelele amanani, amanani, kunye namaphephacatshulwa asebenzayo kwiskrini enye.
Ideshibhodi ibinamakhasi ambalwa, kwaye amaphepha angabonakalisa nantoni na ongayivula okanye ufikelele kwinkqubo yakho yewebhu. Amaphepha angabonisa:
Imiphumo yophicotho apha ichaza isivuno esithunyelwe yi-Oracle ye-intelligence server iseva eyenza ukulungelelanisa imfuno yeemviwo. Isivuno sinokubonakala kwisimo esitshintshileyo, umzekelo, igrafu, i-gage kunye neetafile. Abaxhasi banokuthi baphule kwaye bajonge kwiziphumo, khuphela njengePDVD, baprinte njenge HTML okanye PDF, okanye bahlawule iziphumo kwispredishithi.
Izilumkiso ezivela kubasebenzisi
Ukuqhagamshelana komsebenzi kunye nemenu yokuxhuma
Imiba yezikhuphelo ngaphakathi kwe-Oracle BI yokusungula i-inventory
Iingxelo zee-distributer ze-Oracle BI
Kufakwe umxholo umz
Imiba yeeveloppuleji kwikhowudi yesalathiso
Xa uvula ideshibhodi, into ekhoyo kuyo ibonisa enye okanye kumaphepha. Unokwazi ukwahlula amaphepha edeshibhodi ngamathebhu ngaphezulu kwesahlulo sedeshibhodi. Ekunene kwedeshibhodi, uza kubona ibar yefowuni ekunika amandla oku:
Ukutshintsha ideshibhodi ikunikezele ngeenzuzo ezifunekayo kunye nokugunyazwa
Bonisa izigqibo ezahlukeneyo zokusebenza ngephepha ledeshibhodi; umzekeliso ukhetha ukushicilela iphepha elikhoyo.
Ukwenza ideshibhodi, umntu kufuneka abe noLawulo lweDashboard, kwaye umveleli ujongene nenzuzo.
Kuphela abo baneenzuzo ezifanelekileyo kunye nokuvuma kwideshibhodi, kunye nezinto ezinokuzongezwa kuyo, zinokukwenza ideshibhodi eguqukayo. Ngaphezu koko, utshintshi lwedeshibhodi lwenziwa kwiphepha ledeshibhodi.
Umenzi wedeshibhodi uvumela ukuba uhlanganise amaphepha edeshibhodi kwaye utshintshe loo maphepha. Ngokufanayo unako ukulawula ifomathi yamaphepha uze ungeze amanqaku kwideshibhodi.
Amaphepha anemihlaba kunye namacandelo abambe isicatshulwa sedashboard. Yonke ideshibhodi ayikho iphepha elingaphantsi kwelinye lokucoca.
Iibhloko phezu kwesebo eliphezulu ledeshibhodi ukuqonda amaphepha edeshibhodi. Amaphepha amaninzi anceda ukulungiselela umxholo. Umzekelo, unokuba nekhasi elilodwa lokususa iziphumo ezivela kwiimviwo zakho zemihla ngemihla, elinye iphepha elinxibelelwano kwiisayithi zababoneleli kunye nephepha elinye elidibanisa ne-intranet yakho yenkampani.
Izinto zeDashboard - Ezi zizinto ezizodwa emsebenzini ideshbhodi. Iimeko zeedashboard zibandakanya imisebenzi yokujoyina, amaqhosha abamba umxholo, kunye nenkunkuma efakwe kwi-dashboard.
Bhala izinto - Ngaba izinto oye okanye omnye umthengi uye wazisindisa kwi-inventory ye-Oracle ye-intelligence introductory inventory apho uvumelekile. Imizekeliso ihamba, iimviwo kwaye yinto yokuqala.
Ubuninzi bedeshibhodi, umzekelo, ubungakanani bomxholo kunye ne-shading yesiseko kulawulwa ngu:
Iikhumba - Balawula umboniso weedrobhodidi ze-Oracle, umzekelo, iigosti zenkampani, ii-oes, kunye neemafilithi. Kwinqanaba xa abathengi bebhalisa, izikhumba zingaba kwisibini sokuhlukana. Abalawuli banokwenza izikhumba ezintsha okanye batshintshe ezizenzekelayo.
Izitayela - Ewe, izitayela zilawula ukufomatha kweziphumo zokubonisa. Ukufomathika okunjalo kubandakanya umthunzi woqhagamshelwano kunye nemibhalo, ubungakanani kunye nesitayela somxholo womxholo, iipropati kunye neendwangu zamagrafu, ngaphandle kwetafile, kwaye yinto yokuqala.
Izitala ziza kubaququzeleli ezibandakanya i-cascading Style Sheet (iirekhodi eziqukethe isandiso .css), amafomati kunye neefoto. Abalawuli bangenza amaphepha amatsha amaphepha kunye nokuguqula abanye.
Abaxhasi banokugqithisa amacandelo athile kumakhishithi amaphepha afaka ubungakanani bomxholo kunye neefestile zetekisi xa kufakwa ukufomatha. Bangasebenzisa iziphumo zetabha ukufezekisa oku.
Ukufomathiza izicathulo - Ukufometha kwezinto ezizenzekelayo kuyinto echaphazela umboniso obonakalayo weedashbhoards kunye neziphumo. Unokufaka isicelo kumacandelo, amaqela kunye neziphumo.Yongeza iingxelo kumaphepha edeshibhodi
Ngethuba usebenzisa i-Oracle dashboards, ungeze okungenani enye ingxelo kwiphepha ledeshibhodi. Yenza ukuba kungenakuchukumisa ukuba unika iingxelo zakho kwabanye abathengi kwaye usebenzise abasebenzisi ukucwangcisa amaphepha edeshibhodi.
Ingcali iza kuthumela ideshibhodi yonke kumthengi, kwaye iya kuquka yonke yamaphepha eenkcukacha ezichazwe ngxelo.
Xa uceba i-specialist kwiphepha ledeshibhodi equle ingxelo yenkcazelo yombutho weengcali, khumbula i-criteria elandelayo:
Isilungiselelo sengxelo yomshicileli we-BI kufuneka sibe kwifomati yeFayili
Ingcali kufuneka imiselwe ukuthumela ifomathi yeFayili
Ngoxa ukongeza impendulo kwiphepha ledeshibhodi, unokwenza njengoluqhagamshelwano okanye isilwanyana esilungisiwe. Ufake ucacise ukuba ingxelo iboniswe ngokuthe ngqo kwiphepha ledeshibhodi.